विचार / अभिमत – Page 19 – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
वैद्यको घट्दो राजनीतिक साख जोगाउन चुनाबमा सहभागिताअपरिहार्य !
बद्रिप्रसाद दाहाल हिजो माओवादी वृत्तमा सुप्रिमो प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउन भट्टराई , बादल र वैद्यको गठजोड अपरिहार्य भनेर निकै चर्चा चल्दथ्यो । संभवतःत्यो राजनीतिक गणित यतिखेर धेरै प्रति–सत मिलेको अनुभव भैरहेको छ । किनकि पार्टीमा हाइकमान जमाउन प्रचण्डबाहेक अरुको तागत नचलेको राम्रैसित सिध्द भयो । यसरी वैद्य र..
पुस्तक एवं पठन संस्कृतिको महिमा !
बद्रीप्रसाद दाहाल पुस्तक संस्कृत भाषाबाट आएको तत्समशब्दहो । जसलाई पोथी , ग्रन्थ, किताब , पुस्त, वा आआफ्ना विचार– विषय– ज्ञान–विज्ञान आदि कुराको लिपिबध्द ठेलीभन्ने बुझाउ‘छ । पुस्तक सरस्वतीको प्रतीकभएकोले नै हामी वर्षेनि सरस्वतीको पूजागर्ने दिनअर्थात् श्रीपञ्चमी वा वसन्तपञ्चमीमा दराज र आलमारी भरी राखिएका पुस्तक,..
‘बदलिँदै गएको नयाँ पुस्ताको जीवन शैली’
कपिलदेव सापकोटा (प्रकाश) युवा वर्ग भनेपछि फरक फरक तरिकाले परिभाषित छन् उमेरमा । उमेरको हिसाबले हरेक देश वा विभागले आ–आफ्नो तरिकाले उनिहरुको वर्षको हद तोकिएका छन् । जस्तै – श्रम ऐन, निर्वाचन आयोग, विवाहवारी कानुन जस्ता क्षेत्रले आ – आफ्नो तरिकाले साबालक र नाबालकको परिभाषित गरेका छन् । युवावर्गको बौद्धिक परिभाषा पनि छ । भनिन्छ – उमेरको..
‘बदलिँदै गएको नयाँ पुस्ताको जीवन शैली’ कपिलदेव सापकोटा (प्रकाश) युवा वर्ग भनेपछि फरक फरक तरिकाले परिभाषित छन् उमेरमा । उमेरको हिसाबले हरेक देश वा विभागले आ–आफ्नो तरिकाले उनिहरुको वर्षको हद तोकिएका छन् । जस्तै – श्रम ऐन, निर्वाचन आयोग, विवाहवारी कानुन जस्ता क्षेत्रले आ – आफ्नो तरिकाले साबालक र नाबालकको परिभाषित गरेका छन् । युवावर्गको..
काइते र आइते कहिलेसम्म नाइके ?
बद्रीप्रसाद दाहाल नेपाली समाजमा काइते र आइतेले माउतेको बिंडो थाम्दा हाम्रा जनताले ढिंडो त परै जाओस् खोले पनि खान नपाउने थिति आइसक्यो । राजनीतिदेखि थालनीतिसम्म जालनीतिले राज गरेको अहिले–को विद्रूप स्थितिले दुइ नंबरीहरुकै हाकोडाको मच्चिएको देख्दा कुन इ–मान्दारको मुटु कुटुकुटु खॉदैन र ? ‘हर्रो नपाउ‘दो जाइफल धाउ‘दो ’खाले..
गैससहरु कमाइ खाने भाडो !
हरीभक्त अधिकारी हरीभक्त अधिकारी / नेपालमा गैरसरकारी सस्थाहरुको स्थापना नहुँदै गाउँमा सामाजिक कामहरु थुप्रै भएका छन् । गाउँमा बाटो बनाउने, चौतारा चिन्ने, कुवा बनाउने धेरै कामहरु सामाजिक सेवाका रुपमा भएका छन् । ती कामहरुमा कुनैपनि स्वार्थ रहेको पाइन्न । समुहगत रुपमा गाउँमा भएका विकासका कामलाई विस्तारै सस्थागत रुपमा काम अगाडी बढाउने..
बैरेनी कार्यशाला: अनन्त यात्राको अर्को पाइला
लक्ष्मण शर्मा “हामी त यत्रो बर्षसम्म आफूलाई जे गर्दा उपयुक्त लाग्यो त्यही गर्दैआयौं । केही राम्रो भयो होला केही राम्रो भएन होला। विद्यालय सुधारको लागिविश्वविद्यालय वा तालिमहरुबाट सिकेका कुराहरुभन्दा छिमेकी वल्लो..
बिहे यस्तो होस
- गणेश पाण्डे बिहेको मौसम छ, धेरै बिहेकै चटारोमा छन । पैसा हुनेहरु कसरी उडाउने सोच्दैछन, नहुनेहरु जोहो गर्न घोत्लिंदैछन् । कति त दाइजो लिने र दिने हिसाब गर्दै पनि होलान । विवाह जीवनको एउटा अभिन्न पाटो हो । जुन जीवनको एउटा चरणमा पुगेपछि गरिन्छ । विवाहलाई नया“ जीवनको सुरुवात पनि भनिन्छ । तर, त्यो ‘नया“ जीवन’ थाल्ने सबैका आ—आफ्नै शैली छन् ।..
को हुन त जनता ?
- कपिलदेव सापकोटा (प्रकाश ) तिमी ढाँटिरहेका छौं,छलाई रहेका छौं, हामी भने पत्याइरहेका छौं । हाम्रा नाममा तिमीले जति लुटे पनि हुन्छ, अशान्तिका नाममा जातिय भ्रम नै फैलाएर झुटको खेती गरिरहेका छौं । जति भुटे पनि हुन्छ, हामी पत्याइरहेका छौं,किनकी हामी जनता हौं । रक्षाका निम्ति राखिएका गोलिहरु निसानी बनिरहेका छन् । बर्षो देखि हाम्रै काँध राखेर..
किन बढ्यो सहकारीमा समस्या ?
- काजी परिश्रमी नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि संगै पछिल्लो समययमा समस्या र जोखिम बढ्दो छ । सहकारीहरु मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत संचालन भईरहेको छ । नियमनकारी निकायको कमजोर नियमनका कारण सहकारीले यसको फाईदा लुटेका छन् । जसकारण सदस्यहरुको बचत तथा लगानीमा सुरक्षीत छैन । सदस्यहरुले दुख गरेर कमाएका पैसा जुनसुकै समयमा पनि डुब्ने र..
रत्नाकरहरु वाल्मीकिबन्ने अभिनयमा !
- बद्रीप्रसाद दाहाल यतिखेर नेपाली रत्नाकरहरु वाल्मीकि बन्ने अभिनयमा न्वारनदेखिको बल झिकेर लागेका छन् । जनता जनार्दनको आँखामा फुलो पारेर सत्ताको कुलो सोझयाई आफू र आफ्ना ज्ञाति जनको चुलो बाल्न राष्ट ढुकुटीलाई दुलो पार्ने ठूलो कसरत उनीहरुको रणनीति छ ।वाल्मी-किको बारेमा एउटा सुनेको मिथक यस प्रकारको छ -’ यिनी ब्राहृमणको कुलमा जन्मिएर पनि..
धादिङ- धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कमको सञ्चालन अब डिन्यूज मिडिया प्रा.लि.ले गर्ने भएको छ । नेत्रावती मिडिया प्रा.लि.बाट अनलाइनको स्वामित्व डिन्यूजमा सरेसंगै कम्पनीले धादिङ.....
धादिङ- सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको थानकोट जोड्ने बुहप्रतिक्षित नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएको छ । सडक.....
केशव अधिकारी धादिङ । आयोजना कस्ले बनाउने र कुन ढाँचामा बन्ने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्न नसकेपनि प्रस्तावित १२ सय.....
धादिङ । कोरोना संक्रमणको महामारी थप फैलन नदिन धादिङमा निषेधाज्ञालाई कडाई गरिने भएको छ । जिल्ला सुरक्षा.....